UNHCR: Kenya kama helin amar lagu rarayo qaxootiga * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
UNHCR: Kenya kama helin amar lagu rarayo qaxootiga
By A warsame	 Last updated Apr 12, 2015
Mareeg.com: Qaramada Midoobay ayaa sheegtay inaysan ka helin amar rasmi ah dowlada Kenya si loo xiro xerada qaxootoga oo ay ku jiraan boqolaal kun oo qaxooti.
Sabtidii, madaxweyne ku xigeenka Kenya William Ruto, ayaa sheegay inuu siiyay saddex bilood Hayadda qaxootiga ee UNHCR inay ku xirto xerada saddex bilood gaysana qaxootiga Soomaaliya. Hadii kale ayuu yiri Kenya inay iyada xiri doonto.
Afhayeenka hay’adda UNHCR ee Kenya, Emmanuel Nyaber ayaa sheegay in dowladda Kenya ay ku xadgudbeysa xuquuqda Qaxootiga iyo qawaaniinta caalamiga ah ee dhanka qaxootiga.
ayaa madaxda Kenya ka dalbaday inay ilaaliyaan heshiiskii saddex geesoodka ahaa ay kal hore kala saxiixdeen dowladaha Soomaaliya, Kenya iyo Wakiilada ka socday hay’adda UNHCR.
Qaar ka mid ah siyaasiyiinta Kenya ayaa aaminsan in xerada qaxootiga ay noqotay meel Alshabaab laga qoro. Alshabaab ayaa xasuuqday ku dhawaad 150 arday jaamacada Garissa ee waqooyi bari Kenya.